चेत १५ गते "सन्नाटाको एउटा स्वर" - | Kavyalaya - काव्यालय
चेत १५ गते “सन्नाटाको एउटा स्वर”
by काव्यालय मंसिर २३, २०७६
साहित्यकार तथा लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको जीवनी अब चाँडै नै किताबकृतिका रुपमा पढ्न पाइने भएको छ । उनको जीवनमाथि लेखक उज्ज्वल प्रसाईँले कलम चलाएका हुन् । आइतबार, काठमाडौँमा भएको पुस्तक-आवरण सार्वजनिक कार्यक्रममा लेखक सङ्ग्रौला स्वयंले चैत १५ गते पुस्तकमार्फत आफ्नो जीवनका भित्रि कथाको भण्डाफोर हुने कुरा बताएका हुन् ।
पुस्तकमा सङ्ग्रौलाको जीवनका सम्पूर्ण आयामलाई समेटिइएको लेखक उज्ज्वल प्रसाईंले बताए । सङ्ग्रौलालाई बलियो प्रतिपक्षी आवाजका रुपमा आम नेपाली पाठकले चिन्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाली साहित्य र राजनीतिमा चाख बढ्न थालपछि सङ्ग्रौलाद्वारा लेखिएका विविध सृजना अध्ययन गरेको लेखक प्रसाईंले बताएका छन् । नेपाली समाज र राजनीतिमा आउने गरेका अनेक उतरचढावलाई कहिले सक्रिय संलग्नतामा त कहिले किनारामै उभिएर बुझ्ने र व्याख्या गर्ने प्रयत्न सङ्ग्रौलाले गर्ने गरेको लेखक प्रसाईंले बताए । विगत ४ वर्षदेखि सङ्ग्रौलाको जीवनी लेखमा गहिरिएर लागि परेको कुरा समेत उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै, साहित्यकार एवं समालोचक सङ्ग्रौला, जीवनी प्रकाशन हुने दिन नजिकिँदै जाँदा आफूभित्र भने द्विवधा बढेजस्तो महशुस आफूलाई भइरहेको जिकिर गर्छन् । ‘कुनैदिन यसरी मेरो जीवनी नै तयार होला भनेर त मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ,’ उनले भने, ‘बरु समाजका लागि राम्रो काम गरेका धेरै व्यक्तिहरुको जीवनी आउन बाँकी छ ।’ यसै क्रममा, जीवनमै सबैभन्दा बढी केरकार प्रहरी, श्रीमती र त्यसपछि लेखक उज्ज्वल प्रसाईंले गरेको समेत सङ्ग्रौलाले खुलस्त बताए । ‘द्विवधा र संकोच मानेर पनि उज्वललाई प्रश्नको उत्तर दिएँ,’ उनले भने, ‘मेरो जीवनका सम्पुर्ण कुराको चैत १५ गतेका दिनमा प्रकाशन मात्र होइन भण्डाफोर हुनेछ ।’
यस्तै, समाजसेवी तथा योगगुरु दीपक भेटवालले सङ्ग्रौलाको जीवनी लेखिनु पर्छ भनेर आफूले नै प्रसाईंलाई आग्रह गरेको बताए । अप्ठ्यारो समयमा पनि सत्य बोल्न हिम्मत गर्ने र तिनलाई शृङगार गर्ने शिल्पको संयोजन गरेर सङ्ग्रौलाले लेखन यात्रामा ५ दशक बिताइसकेका उनको भनाइ थियो ।
सङ्ग्रौलाको सिर्जना पढ्ने आफू मात्र नभएर भविष्यका पुस्तालाई प्रेरणाको स्रोत जरुरी भएले सङग्रौलाको जीवनी ल्याएको उनले बताए । प्रकाशन गृह बुक—हिलका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्काले भने “बुकको ९० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । आउँदो चैत्र १५ गतेसम्म १० प्रतिशत काम पनि सकिएर पाठकको हातमा परिसक्ने छ ।” किताबको नाम “सन्नाटाको एउटा स्वर” रहेको जानकारी छ ।
लेखक खगेन्द्र संग्रौलाको जीवनी ‘सन्नाटाको एउटा स्वर’ प्रकाशन हुने भएको छ। पुस्तक उज्ज्वल प्रसाईले लेखेका हुन्। बुक हिलले प्रकाशन गर्न लागेको सो पुस्तकको आवरण आइतबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो।
संग्रौलाले आफ्नो बारेमा प्रशस्त लेखिसकेको हुनाले उनका जीवनी लेख्नु चुनौतीपूर्ण महसुस गरेको प्रसाईले बताए। पुस्तक लेख्ने क्रममा आफूले संग्रौलाको तर्फबाट नेपाली समाजको सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्ने प्रयत्न गरेको उनको तर्क छ।
‘यो जीवनी हो। संग्रौला यसका मुख्य विषय हुन्। तर संग्रौला मात्रै यसका विषय होइनन्’, प्रसाईले भने, ‘संग्रौला जहाँ जन्मिनुभयो। जहाँ हुर्किनुभयो। आज उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ। त्यस्तो कसरी बन्नुभयो? सम्भवतः यो समाजले बनायो।यहाँको शक्ति संरचनाले संग्रौलालाई संग्रौलाजस्तो बनायो। शक्ति संरचनामा कहिले हेलिनुभयो। कहिले प्रश्न गर्नुभयो। कहिले बदल्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यो अभियानमा लागेको मान्छेले नेपाली समाजसँग कसरी संवाद गर्‍यो? संग्रौलालाई बहाना बनाएर नेपाली समाजको अध्ययन गर्ने एउटा मौकाको रुपमा मैले यो लेखनलाई बुझें।’
संग्रौलाले भने आफू कथा भएको र प्रसाई कथाकार भएको बताए। उनले जीवनी लेख्ने प्रसंग उठेदेखि आफ्नो मनमा अन्तर्द्वन्द्व उठेको बताए।
मलाई जिन्दगीमा मुख्यरुपमा तीनथरिले केरकार गरेका छन्। पहिलो, पुलिस, अञ्चलाधीश र जर्नेल। दोस्रो, श्रीमती। र तेस्रो, प्रसाई।
‘धेरैले भनेको सुन्दा मलाई के लाग्थ्यो भने समकालीन नेपाली समाजको अत्यन्त साहसिक मान्छे हुँ। धेरैले भनेपछि मेरो आँखामा पनि त्यस्तै एउटा बिम्ब बनेको थियो। प्रसाईले अत्यन्त कठोरताका साथ, प्रेमपूर्वक प्रहरीले जस्तै केरकार गरेपछि मभित्रका धेरै कुरा बाहिर आएका छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले यो जीवनी होइन, खगेन्द्र संग्रौलाको एक किसिमले भण्डाफोर हो। यसका व्यापक भण्डाफोर भएका छन्।’